GOCOOLTHOKAR: August 2011
कहिले पाउने हो भाउ जिन्दगीको
कहिले पाउने हो भाउ जिन्दगीको ।
तर्ने कसरी हो नाउ जिन्दगीको ।
छक्का पन्जा बिनै खाल बस्या छु
लाग्छ कसरी खै दाउ जिन्दगीको ।
अरु देब्रे चल्दा आफु दाहिने तिर
कसरी हो मिल्ने पाउ जिन्दगीको ।
कति कट्ला जोवन यसै गरि गरि
भेटाउने कसरी गाउँ जिन्दगीको ।
Labels: dolakha, gajal, gazal, gocool, thokar
दिगो शान्तिको लागि आर्थिक बिकास
देशमा चलेको शशस्त्र द्धन्द्धबाट धेरै कुरा नराम्रो भयो । कतिले आफन्त गुमाए कतिले आफ्नो घरबार । यस्ता दुःखपीडाको पाउनेको संख्या लाखौ भए । तर केही युवाले युद्धको घाउलाई शक्तीमा बदले । जीवनमा केही राम्रो काम गरे । आफ्नो जीवन सुधारे अनि समाजको लागि पनि उधारणिय बने । यस्तै युवाको कथा समेटिएको डकुमन्ट्रि हो दिगो शान्तिको लागि आर्थिक बिकास ।
नेपाल टेलिभिजनमा साउन ३२ गते बुधबार बेलुकी ७.३० बजे ।
एभिन्यूज टेलिभिजनमा भदौ २ गते शुक्रबार बेलुकी ६.३० बजे ।
कान्तिपुर टेलिभिजनमा भदौ ३ गते शनिबार बेलुकी ६.३० बजे ।
अनि तराई टेलिभिजनमा भदौ ४ गते आइतबार बेलुकी ७ बजे ।
प्रशारण हुँदै छ हेर्ने प्रयास गर्नु होला ।
Labels: documentary, gocool, thokar
फेसबुक कुमारी भाग २
कतै धान फलेर पहेलपुर त कतै तरकारी साग सब्जीले हरियो खेत । हरिया सागपात चाहियो कि खेतमा गयो टिप्यो ल्यायो पकायो । समस्या केही थिएन । जव पहिलो पटक गोर्खेली युद्ध गर्ने आए । खेतमा भएको धेरै कुरा नासियो । धेरै कुराको समस्या भएपनि सबै भन्दा समस्या तरकारीको प¥यो । खेतका खेत भएका हरिया सागसब्जी यता र उताका फौजले कच्याककुच्युक पारे । कुदेर गएर टिपेर खानु पर्ने तरकारी नभएपछि सबैलाई समस्या भो । यु्द्धमा गोर्खलीले हारे । कीर्तिपुरबासीले फेरी युद्ध हुने छनक पाए । त्यसैले खेतका सबै सागलाई ल्याएर कुच्याउदै गाड्ने र सुकाउने गर्ने थाले । कहिल्यै यसरी नराखिएको सागको स्वाद निक्कै अनौठौ लाग्यो । तेस्रो पटकको प्रयासमा गोर्खालीले कीर्तिपुरलाई जित्यो । गोर्खालीले पनि गुन्दु्रकको स्वाद चाखे अनि नेपाल भरि पु¥याए । हो त्यही कीर्तिपुरकी थिइ ज्ञानु माली ।
नेवारनी भएर पनि नेवार जस्तो नलाग्ने अनुहार । म त्यसैमा झुक्किएको थिएँ शायद अरु पनि झुक्किदा हुन ।
एक अर्कामा एड भएको झण्डै एक महिना हामीले केही कुरा गरेनौ । म बेला बेलामा उनको प्रोफाइल अपडेड भने हेर्थे । अरुका कमेन्ट पनि ।
मार्च महिनाको पहिलो सोमबार । अफिसमा मेरो खासै काम थिएन भनौ काम गरि सकेर म फुर्सदमै थिएँ । फेसबुक चेक गर्दा उनी पनि अनलाइन थिइन । कुराकानी समान्य भो हाइहेल्लो । अनि घरपरिवारको कुरा भो । उनको घरमा बा आमा त भैहाले अनि बिहे भैसकेको दिदी र एक दाइ थिए । वा ठेक्का पट्टामा काम गर्थे र सानो तिनो राजनैतिक कार्यकर्ता । दाइले पनि बाकै बाटो समातेका थिए ।
राजनीतिमा उनको पटक्कै रुचि छैन रे । त्यसैले उनको र उनको बाको कुरा खासै मिल्दैन रे । संगीत पनि सबै खालको उतिकै मन पर्ने कुरा सुनाइन । पढाइ एम ए सोसोलोजी अनि अहिले काम एउटा नाम चलेकै आइएनजिओमा । उनले बिचैमा लेखिन भोली पनि यस्तै समयमा कुरा गर्ने है । हुन्न भन्नु मेरो केही थिएन । ओके भनेर लगआउट गरे ।
काठमाडौ समय यस्तै न हो कुन्नि के भएर हो त्यो समय बिजुली आएन । म अनलाइन भइन ।
त्यो दिन मलाई याद छ त्यो ठ्याक्कै त्यो शायद मार्च महिनाको दोस्रो हप्ता थियो । म शायद त्यो भन्दा अगाडि काभ्रेको खार्पाचोक गाउँ घुमेको फोटाहरु अपलोड गरेको थिए । केही मिल्ने साथीलाई ट्याग पनि । उनलाई पनि मैले ट्गाय गरेको थिएँ । उनले कमेन्टमा ढटुवा भनेर लेखिकी रहिछिन् ।
मैले कमेन्टलाई खासै ध्यान दिएर हेरेको थिइन । त्यो दिन पनि उनीसँग अनलाइन भेट भयो । मैले औपचारिकताबस हाइ भने उनले उतर दिइनन । मैले फेरी के भयो भनेर लेखेँ । उनले उतर दिइनन । मलाई लाग्यो आफ्नो एकाउन्ट खोलेर कतै गइछिन । आधा घन्टा फेरी अघिकै कुरा लेखेँ ।
म तिमीसँग बोल्दिन । उताबाट टाइप भएर आएको अक्षर ।
किन नी ?
तिमी अघिल्लो हप्ता अनलाइन आउछौ भनेर नआएको होइन ।
हो तर मेरो बाध्यता थियो के गर्नु ?
के हो नी त्यस्तो बाध्यता तिमी मलाई भन्न सक्दौन थियौ त ?
भन्न त चाहान्थे फेसबुक भन्दा हाम्रो केही कन्ट्याक थिएन । त्यसैले भन्न सकिन ।
त्यसो भए मेरो नम्वर लिउ न त ।
मैले केही नभनी उताबाट नम्बर टाइप भएर आयो ।
यो पटकको अनलाइन भेटमा पहिलो भन्दा अलि बढि घरयासी कुरा भए ।
हामी एक अर्काको घरपरिवारको बारेमा सकेसम्म लेखिरहेका थियौ । हामीले लगभग चार घन्टा एक अर्कोको कुरा लेखालेख ग¥यौहोला । उनले लेखेको कुराको सार यस्तो थियो ।
दिदी र मेरो उमेर फरक २० बर्षको । दिदीको बिहे भएको पनि निक्कै बर्र्ष भैसकेको तर अहिले पनि माइतमै बस्ने । । कारण भिनाजुको उमेर । निक्कै बढी । त्यसमा पनि एउटा नरमाइलो कथा । मेरो कान्छा बाजेको एउटै मात्र छोरी मिखा फुपु । उनको बेभाको निक्कै समय पछि सम्म पनि कुनै सन्तान भएनछन् । फुपाजुहरु निक्कै सम्पन्न र धनि काठमाडौ महाबौद्धका । असनमा चल्ने दुईवटा पसल । दुबै पसलमा सबै कुरा पाइने । पासः पसः भने पछि उनका पसललाई त्यताका सडकमा बस्ने कुकुरले पनि देखाउथे भन्ने चलन थियो रे । दुबै पसलबाट प्रशस्तै पैसा कमाई हुने ।
फुपुबाट सन्तान नभएपछि घरको करकरले उहाँ माइतै बस्न थाल्नु भयोरे । अनि फुपाजुको घरमा दास्रो बिहे गर्ने भन्ने कुरा घरमा निक्कै चल्योरे । फुपुसँग सल्लाह गर्न पाजु ससुराली अर्थात हाम्रो कान्छा बाजेको घर आउनु भयो रे ।
मैले सुने अनुसार उहाँ मिखा फुपुलाई एकदम माया गर्नु हुन्थ्योरे । बिहेको कुराले फुपुलाई भन्दा बढि उहाँलाई चिन्ता भाको रे । अनि फुपाजुले पसल घर छाडेर भागेर दोलखा बजारमा जाने कुरा पनि फुपुलाई राख्नु भएको थियो रे । तर फुपुले माइतीको नाकको लागि भन्दै अर्की ल्याएपनि आफुलाई कुनै अप्ठ्यारो नहुने बताएपछि फुपाजु अर्की बिहेको लागि तयार भाको रे ।
फुपाजु ससुराली खलकमा निक्कै मनपराइको ज्याईमा पर्थे ।
मेरो हजुरबालाई पनि ज्वाई निक्कै मन परेको थियो रे । मैले थापाउदा पनि हजुवा ती फुपाजु भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे । अनि हजुरबाले नै ज्वाईका लागि केटी मै खोज्दिन्छु भनेर सम्धीसँग भेटेछन् । अनि केटी खोज्दा धेरै केटी भएपनि हजुरबाले कसैलाई मन पराएनछन् । अन्त्यमा उनले नै नाता नातै रहोस भनेर मेरी दिदी नातिनीको बिहेका लागि कुरा चलाएछन् । नाताले फुवाजु र भदाहीको बिहे नहुने तर पनि हजुरबाले सम्धीलाई धेरै कुराले सम्झाएछन् । त्यो बेला हजुरवालाई सम्धीले भनेका थिए रे पहिले बाबुसँग सम्धी भैसकेको नाता कसरी छोरालाई पनि सम्धी भन्नु ?
Labels: facebook kuramri, gocool, story, story of gocool, thokar